Video:-Soomaaliya iyo Eretereya oo kala saxiixday heshiis – Idil News
Video:-Soomaaliya iyo Eretereya oo kala saxiixday heshiis
Posted By: Idil News Staff July 30, 2018
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea oo saddexdii maalmood ee tagey ay wada-hadallo uga socdeen magaalada Asmara ayaa kala saxiixday heshiis afar qodob ka kooban, sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta Eritrea.
Afarta qodob ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki ay ku heshiiyeen ayaa kala:
1-Soomaaliya waxaa lagu maneystay inay ku taal bar istaraatiiji ah, waxayna leedahay kheyraad daabiic ah iyo mid aadami. Si kastaba, waxaa ka faa’iideysasha kheyraadkaas ka hor-istaagay dhibaato gudaha ah iyo faragelin dibedda ah. Sidaas darteed Eritrea waxa ay si xooggan u taageereysaa madaxbannaanida siyaasadeed, qarannimo iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya iyo sidoo kale dadaallada dadka iyo dowladda Soomaaliya ay kusoo celinayaan maqaamkii ay Soomaaliya mudneyd iyo ku guuleysashada himilooyinka ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin..
2-Soomaaliya iyo Eritrea waxay isku dayi doonaan inay dhisaan xiriir aad u dhow oo siyaasadeed, dhaaale, bulsho, dhaqan iyo sidoo kale wada shaqeyn difaac iyo mid amni.
3-Labada waddan waxay aas-aasi doonaan xiriir diblomaasiyeed ayaga oo is-dhaafsan doona safiiro, waxayna sare u qaadi doonaan xiriirka ganacsi iyo kan maal-gashi, ayaga oo sidoo kale is-weydaarsan doona waxbarashada iyo dhaqanka.
4-Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay ka wada shaqeyn doonaan xoojinta nabadda, xisloonida iyo is-dhexgalka dhaqaale ee gobolka,hoos ak daawo muuqaalka.